Orinasa fitrandrahana - mpanamboatra sy mpamatsy fitrandrahana any Sina
legioma ultrasonic rafitra fitrandrahana zavamaniry
Ny legioma, voankazo ary zavamaniry hafa dia misy akora mavitrika betsaka mahasoa, toy ny VC, VE, VB sns. Mba hahazoana ireo akora ireo dia tsy maintsy ravana ny rindrin'ny sela. Ny fitrandrahana ultrasonic dia voaporofo fa ny fomba mahomby indrindra. Ny fihoaram-pahefana haingana amin'ny famotopotorana ultrasonika ao anaty ranoka dia miteraka jet bitika mahery vaika, izay mamely hatrany ny rindrin'ny sela mba hamakiana azy, raha mivoaka kosa ny fitaovana ao amin'ny rindrin'ny sela. Fitaovana fototra fitrandrahana Multifunctional ...
Fitaovana fitrandrahana CBD ultrasonic any amin'ny laboratoara
Fitaovana fitrandrahana ultrasonic CBD any amin'ny laboratoara dia afaka mitsapa ny tahan'ny fitrandrahana sy ny fotoana fitrandrahana CBD amin'ny solvents samihafa, afaka manome data ho an'ny mpanjifa ao anatin'ny fotoana fohy, ary mametraka ny fototra ho an'ny mpanjifa hanitatra ny famokarana.
Fitaovana fitrandrahana solika CBD solika
Ny herin'ny herinaratra matanjaka ateraky ny cavitation ultrasonic dia miditra ao amin'ny selan'ny zavamaniry, manosika ny solvent solvent mankany anaty sela ho an'ny fitrohana sy fitrohana ny CBD
Fitaovana fitrandrahana ahitra ultrasonic
Ny fanadihadiana dia naneho fa ny fitambaran'aretina dia tsy maintsy miendrika molekiola mba ho azon'ny sela olombelona. Ny fihoaram-pahefana haingana amin'ny famotopotorana ultrasonika ao anaty ranoka dia miteraka jet bitika mahery vaika, izay mamely hatrany ny rindrin'ny sela mba hamakiana azy, raha mivoaka kosa ny fitaovana ao amin'ny rindrin'ny sela. Ny fitrandrahana ultrasonic ny akora molekiola dia azo zahana amin'ny vatan'olombelona amin'ny endrika isan-karazany, toy ny fampiatoana, liposome, emulsion, menaka, menaka, pilina, pilina, kapsily, vovoka, granules ...
ultrasonic Cannabidiol (CBD) fitaovana fitrandrahana hemp
Ny fitrandrahana ultrasonic dia afaka misafidy solvents samihafa arakaraky ny fampiasana CBD manaraka, izay manatsara be ny tahan'ny fitrandrahana, mampihena ny fotoana fitrandrahana ary mahatsapa fitrandrahana mahomby sy mahomby amin'ny tontolo iainana.